Sulsule – A truly news portal
एमालेले सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग र्‍गयो ! फुटेज डिलिट भयो : अर्थमन्त्रालय
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटभन्दा अघिल्लो दिन (जेठ १४) गते रातिको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको बताएको छ । बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिइएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागेको प्रमुख ...
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तरघातको छानबिनका लागि एमालेले विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमाएक समिति गठन गरेको छ। आइतवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको ...
नेपाल-चीन सैन्य सम्बन्ध: कुनै बेला ‘एन्टी एअरक्राफ्ट गन’ किनेको नेपालले अहिले बेइजिङसँग कस्तो सैन्य सम्बन्ध राखिरहेको छ ?
काठमाडौँ । चर्को विवादपछि संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम अन्तर्गतको रक्षा साझेदारीबाट नेपाल पछि हटेको छ। उक्त कार्यक्रमबाट अलग हुने नेपाल सरकारको निर्णयको चीनले प्रशंसा गरेको छ। बेइजिङसँग नेपालको ...
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै गएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यसको पछाडि नेपालीको परनिर्भर जीवनशैलीले पनि काम गरेको छ । जुन ...
चीन-अमेरिका सम्बन्ध: चीनले तत्काल ताइवान आक्रमण गर्ने अवस्था नरहेको अमेरिकी सेना प्रमुखको भनाइ
काठमाडौँ । चीनले ताइवानमाथि तत्काल आक्रमण गर्ने अवस्था नदेखिएको तर अमेरिकाले त्यहाँको अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको एक अमेरिकी जेनरलले बताएका छन्। चीनले कुनै बेला आक्रमण गर्न क्षमता विस्तार गरिरहेको तर यसबारेको ...
माओवादी केस बैठक : साङ्गठनिक अराजकता हटाउनेदेखि आगामी योजनासम्म (यस्तो छ पूर्ण पाठ)
काठमाडौँ । पटकपटक सर्दै आएको नेकपा(माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागीले पार्टीभित्रको साङ्गठनिक अराजकतालाई तत्काल सच्याएर जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । गत पुसमा पार्टीको आठौं महाधिवेशन सम्पन्न भयो । त्यसले ...
बेपत्ता क्रिप्टोक्वीन डा. रुजा इग्नाटोभा: के उनी बिटकोइनकी ठूलो लगानीकर्ता हुन्?
काठमाडौँ । क्रिप्टोकरेन्सीको बजार सङ्कटमा देखिएको बेला बीबीसीले देखेका दस्ताबेजहरूले बिटकोइनमा एक अनपेक्षित लगानीकर्ताले ठूलो रकम गुमाइएको देखिएको छ। बिटकोइनलाई प्रतिस्थापन गर्ने क्रिप्टोकरेन्सी ओनकोइन बनाएको दाबी गर्दै करोडौँ डलर लगानी ...
काठमाडौँ । एउटा सोमवारको बिहान। युक्रेनका फेडीर शान्डोर अनलाइन कक्षा पढाउन फोनमा लगइन गर्दै छन्। कोभिड महामारीका कारण यी विश्वविद्यालय प्राध्यापकले अनलाइन पढाउन थालेको धेरै भयो तर गएका केही महिना ...
काठमाडौँ । भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएपछि आगामी दशैँसम्ममा नेपाली बजारमा गहुँ तथा मैदाको ठूलो अभाव हुन सक्ने व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्। गहुँ आयात गर्नका निम्ति नेपाल सरकारले ठोस कदम ...
काठमाडौँ । विश्वका विभिन्न मुलुकबीच हुने व्यापारसम्बन्धी काम कारवाहीमा संस्थागत एवं कानूनी आधार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सन् १९९५ जनवरीमा स्थापना भएको विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) को १२औँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन केहीअघि ...
काठमाडौं । सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवाहरु अब अनलाइनबाटै प्रदान गरिने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना ...
नेपालमा थप ५३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण, २० जना संक्रमण मुक्त
नेपाली कांग्रेसको टिकटबाट चुनाव जितेकी मेयर चलाउने व्यक्ति हत्याको आरोपमा पक्राउ
राहदानी वितरण प्रभावकारी बनाउन माग गर्दै युवा संघले बुझायो विभागमा ज्ञापन पत्र
दोलखामा बस एकआपसमा ठोकिएर दुर्घटना हुदाँ दर्जन बढी घाइते
नगरप्रमुख साम्पाङद्वारा श्रमदान
गरिबी निवारण गर्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटभन्दा अघिल्लो दिन (जेठ १४) गते रातिको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको बताएको छ । बजेट निर्माणमा अनाधिकृत ...
‘कोष सञ्चालन गर्न बनेको ऐनको जन्म नै गलत प्रक्रियाबाट भयो’
विष्णुबाबु मिश्र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनी कोषबाटै जागिर सुरु गरेर ...
वीरगञ्जलाई शून्य भ्रष्टाचार महानगरपालिका बनाउने छु : नगरप्रमुख सिंह (अन्तर्वार्ता )
हाइटीमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी ३०४ व्यक्तिको मृत्यु, एक हजार ८०० घाइते (फोटो फिचर )
काठमाडौं । सहज भनेर चिनिने नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम (एनएएमडीपी)ले दोस्रो चरणको सहज च्यालेन्ज फन्ड राउन्ड १ का विजेताहरू ...
काठमाडौं । सहज भनेर चिनिने नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम (एनएएमडीपी)ले दोस्रो चरणको सहज च्यालेन्ज फन्ड राउन्ड १ ...
भाइवर साइमनले जिते नेपहपको श्रीपेचको उपाधि
काठमाडौं । नेपालकै पहिलो हिपहप सङ्गीतको रियालिटी शो ‘नेपहपको श्रीपेच’को उपाधि भाइवर साइमनले जितेका छन् । ...
खुमन र शान्तीश्रीको स्वरमा तिज गीत ‘थरी थरी भोले’ सार्वजनिक
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सङ्घीय शिक्षा ऐनसहित विभिन्न छ वटा शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको ...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समितिको बैठक राजधानीमा सुरु भएको छ । गत पुसमा आठौँ ...
शेरबहादुर देउवा: सरकार मिलेर चलाउँदै तर दलभित्र ‘दमनकारी’को छवि किन?
काठमाडौँ । चीनले ताइवानमाथि तत्काल आक्रमण गर्ने अवस्था नदेखिएको तर अमेरिकाले त्यहाँको अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको एक अमेरिकी जेनरलले ...
काठमाडौं । नेपाल एस्पोर्ट्स संघको आयोजनमा तेस्रो नेपाल एस्पोर्टस च्याम्पियनसिप यही असार २३ देखि २५ गतेसम्म ...
एसईईमा सहभागी विद्यार्थीहरुका लागि फुटसल र बास्केटबल प्रतियोगिता
नेपालमा ‘चिन्ताजनक’ साइबर हमला हुने गरेको खुलासा, बच्न कसले के गर्नुपर्छ?
काठमाडौँ । सूचना प्रविधि बारेको एउटा नयाँ प्रतिवेदनले नेपालका सरकारी निकाय, नियामक संस्था र निजी क्षेत्रका ठूला सेवा ...
इन्टरनेट: सेवा शुल्क घटे पनि अरू कर कायम, यसबाट ग्राहकलाई कस्तो प्रभाव